Daawo:-Su’aalo la weydiiyeen Wasiir Islow Ducaale oo ka jawaabay - Awdinle Online
Daawo:-Su’aalo la weydiiyeen Wasiir Islow Ducaale oo ka jawaabay
December 8, 2019 (Awdinle Online) –Maxamed Abuukar Ducaale Wasiirka Amniga dowladda federalka oo maanta hortagay Baarlamaanka Federalka Soomaaliya ayaa ka jawaabay su’aalo ay xildhibaanada weydiiyeen.
Su’aalaha la weydiiyay Wasiirka Amniga ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha qaadashada baasaboorada,qaraxii xarunta gobolka Banaadir,xildhibaan laga celiyay garoonka diyaaradaha iyo in dhalinyaro loo qoray taliyaal saldhig.
Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow ayaa daafacay in dhalinyarada loo magacaabay taliyaasha saldhigyada isagoo ammaanay taliyaasha howlaha ay qabteen bilihii la soo dhaafay.
Sidoo kale Wasiirka Amniga oo wax laga weydiiyay qaraxii uu ku dhintey guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Inj Yariisow ayaa sheegay in baaritaanka qaraxaasi uu weli socda balse marka la soo gabagabeeyo la soo bandhigi doono.
Wasiirka Amniga ayaa sidoo kale su’aal laga weydiiyay xildhibaan laga celiyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maalinta Talaadada ah guddiga amniga arrimaha gudaha ay kulan kala qaadan doonaan warkaas.
Halkan hoose ka daawo qaar kamid ah su’aalihii la weydiiyay wasiirka amniga Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow.
Previous articleWasiiradda Warfaafinta iyo Waxbarashada oo khilaaf Cusub soo kala dhex galay
Next articleRoobabkii Ka Da’ay Puntland Oo Dad Lagu La’Yahay